Kedu otu dọkịta na-agwọ ọrịa si bụrụ ecommerce | ECommerce ozi ọma
Kedu otu ọkachamara maka ọgwụgwọ anụ ahụ si bụrụ ecommerce
ECommerce ozi ọma | | eCommerce
Ọ bụghị ihe nzuzo nye onye ọ bụla na ọrịa 2020 a manyere ọtụtụ (ndị omenala ọdịnala) nzukọ na ndị mmadụ n'otu n'otu banye na azụmahịa e-commerce iji gaa n'ihu na-arụ ọrụ ha. Otú ọ dị, azụmahịa e-commerce ghọrọ ihe bara uru karịa ka ha tụrụ anya ya n'ihi ọtụtụ nwee ike ịmụba azụmahịa ha, ma na-enyekwu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na ụgwọ dị ala karị.
Otu n'ime ihe ịga nke ọma ndị a bụ nke ọkà mmụta ọgwụ a ma ama Site na Felipe Madrid nke, n'ihi ihe a na-akpọ "nkịtị nkịtị", ejirila gbasaa azụmahịa ya site na ịnye ọ bụghị naanị ọrụ ọkachamara ya, kamakwa ngwaahịa. Ma nke ahụ bụ Flọ ahịa Felipe Ọ bụ otu n'ime ihe atụ nke azụmahịa azụmahịa nwere ike inye ndị ọzọ nwere mmasị ịmalite.
1 Kedu ihe azụmahịa e-commerce na-enye ndị mmadụ n'otu n'otu?
1.1 Mara ndị ahịa gị
1.2 Zere ịdaba '' ọnụ ahịa agha ''
Kedu ihe azụmahịa e-commerce na-enye ndị mmadụ n'otu n'otu?
N'adịghị ka mgbochi ezi uche dị na ya na-echekwa n'ụlọ ahịa anụ ahụ, na ụwa dijitalụ ọ ga-ekwe omume ịkọ enye ihe niile na a kacha nta na-eri. N'ihe banyere e-azụmahịa nke dermatologist Felipe, ọ bụghị naanị na ndị ọkachamara ọrụ ahụkarị nke ọgwụ ọkachamara na-awa, ma azụmahịa na-aga n'ihu:
Na-agba izu mebere
Un nnukwu katalọgụ nke ngwaahịa na ụdị
Ọrụ nnyefe ụlọ n'efu ma laghachi
Ọ bara uru na-echeta na ọ dịghị mkpa ịnwe ngalaba ụlọ ahịa ma ọ bụ n'ụzọ anụ ahụ ka ngwaahịa a na-enye. N'ezie, n'ọtụtụ ọnọdụ, onye nwe e-commerce anaghịdị ahụ ihe ngwaahịa ahụ dị. Olee otú ha si eme ya? Na-eji usoro e-commerce eme ihe igwu mmiri
Mgbanwe a nke ụdị azụmaahịa Felipe gbanwere dabara na ndị ọkachamara ọ bụla (n'agbanyeghị ọrụ) ma ọ bụ onye ọ bụla chọrọ ịmalite. Agbanyeghị, a gharịrị iburu n'uche akụkụ ụfọdụ dị mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma na azụmahịa e-commerce.
Omume, ụkpụrụ, mmasị na usoro oriri dị iche na nke ndị ahịa ọdịnala. N'ezie, ndị ọrụ na-azụkarị n'ịntanetị na-akpachapụ anya ma na-agwa ha, ebe ọ bụ na ha na-enyocha na weebụsaịtị dị iche iche, yana na netwọk mmekọrịta. Yabụ, ịnye naanị ngwaahịa na ọrụ agaghị ezu iji dọta ha, gbanwee ha n'ime ndị ahịa ma jigide ha.
Iji ruo ndị ahịa nwere ike, ọ dị mkpa iji atụmatụ nkwukọrịta nke ha chere "na-akụ" ma ọ gaghị elekwasị anya naanị n'ịkwalite ngwaahịa na ọrụ. Ndị na-eji Intanet eme ihe ji eziokwu ahụ kpọrọ ihe nke ukwuu gwa ndị mmadụ okwu n’azụ azụmahịa.
Zere ịdaba '' ọnụ ahịa agha ''
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na asọmpi na ịntanetị bụ "ihe jọgburu onwe ya", nke a apụtaghị na o kwesịrị ịdaba na nzuzu nke iwepụta agha agha na n'ikpeazụ ọ ga-ewetu ọnụahịa ahụ ala ma chụpụ ezi ndị ahịa. Ikwesiri ighota nke oma na otu ihe bu inye ego na nkwalite, na ihe ozo bu iwetulata onu ahia rue n’inweghi ike inweta uru pere mpe.
Ọ dị mkpa ikwu na ọ bụghị ndị ahịa niile na-azụta site na ụlọ ahịa na ntanetị na-adị mma. N'ezie, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa dijitalụ akwụsịghị iguzosi ike n'ihe nye akara ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kedu otu ọkachamara maka ọgwụgwọ anụ ahụ si bụrụ ecommerce
Aliexpress, enwere ntụkwasị obi?